ထုတ်ကုန်များ | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
DDR = Double Data Rate ကိုနှစ်ချက်မှုနှုန်း synchronous dynamic random access memory ကို. တင်းကြပ်စွာ DDR စကားပြော DDR SDRAM ကိုခေါ်တော်မူရပါမည်, people are used to calling it DDR What is DDR and what is it used for? DDR SDRAM is the... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ပရိုဆက်ဆာ Nokia က device ကိုမော်ဒယ် OS ကို-STORE ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် 64-နည်းနည်းက Windows HTC က စီပီယူ Software များ Technology_Internet စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Intel က Samsung က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု မိုဘိုင်းဖုန်း စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ HD Graphics နည်းပညာ processor ​​ကို ဥပဒေရေးရာအနက်
Intel က Server ကို processor ​​ကို Software များ 64-နည်းနည်းက Windows Sony Ericsson က device ကိုမော်ဒယ် Technology_Internet ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် မိုဘိုင်းဖုန်း Intel က Samsung က ဥပဒေရေးရာအနက် OS ကို-STORE စမတ်ဖုန်းများ Nokia က စီပီယူ ပရိုဆက်ဆာ HD Graphics စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Samsung ရဲ့ Galaxy HTC က နည်းပညာ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Qualcomm မှ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု